Ụbọchị My Pet » M Lee onye na-amasị m – Ugbu a, ihe?
Ya mere, na ị na aka ruo a di na nwunye nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na na n'ezie hụrụ mmadụ ole na ole ị ga-amasị-esi mara mma… ma eleghị anya ọbụna ụbọchị. Kedu ihe ị na-eme ugbu a?
Ọfọn, ị pụrụ itinye gị na profaịlụ ma na-eche ka mmadụ kpọtụrụ gị, ma eleghị anya ị ga-esi ihe ndị ka mma ma ọ bụrụ na ị na-ebute ụzọ. Mgbe ị na-ahụ onye na-akpali ma na-enwe agụụ na-ekwu “Hey”, atụla ujo! Nke ahụ mmadụ nwere ike nnọọ n'anya na-anụ gị. Ka emechara, ha kere a profaịlụ, dị nnọọ ka unu, na-enwe olileanya nzute onye. Ị maa ga-amaghị ma na ị kpọtụrụ ha ma na-achọta.
Ladies, ihere emena gị – ndị ikom n'anya na-achụ!
Olee otú ị na-amalite na kọntaktị?
Kacha nkịtị ụzọ kpọtụrụ onye bụ na email, ntabi ozi, ma ọ bụ a 'wink'.
M nwere ike ikwu na-azọpụta ozugbo ozi ruo mgbe ị na-na na gbanwere a ole na ole ozi ịntanetị n'ihi na ọ na-enye gị oge na-eche banyere ihe ị na-aga ikwu na iji na-obi na-adị ka onye nke ọzọ. Ozugbo ị nweta ihe maara na onye ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịmalite na-akparị ụka.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a kwụrụ otu, ị ga-yikarịrị nanị iji 'winks’ ma ọ bụ 'ọnụ ọchị’ ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ. Ndị a bụ mkpọ ozi nke ga-ekwu ihe dị ka “Nancy bụ mmasị n'ebe ị” ma ọ bụ “Joe winked gị”. Winks na ọnụ ọchị na-a ngwa ngwa ụzọ ikwu hello ma ukwu-amachi gị ike pique onye nwere mmasị. Nke a na etiÚnye a otutu nsogbu na-enwe a kemmenyeujo profaịlụ n'ihi na ọ ga-eme ihe niile nke gị okwu maka gị.
Email kasị mma na mmalite.
Emailing a nwere ụbọchị a dị nnọọ ka achụ. Nzube nke mbụ email bụ iji nweta ha iji zaghachi, na-emeghe a kwuo. You want to get their interest but leave it open-ended so that they will respond back to you. Nọgidenụ na-ozi ịntanetị obere na maa mma. Ọzọ n'ọnụ: adịghị izipu a barrage nke ozi ịntanetị otu onye, follow their pace, and try to keep up. (Ọ bụrụ na ha iziga 4 a izu, ị na-eziga 4 ma ọ bụ otú a izu.)
Ya mere Olee Ị dee na mbụ Email?
Mgbe anyị na-aza onye mgbasa ozi, na-agbalị ịbụ, ọma, personable. Dee dịkarịa ala a na paragraf ma ọ bụ abụọ banyere onwe gị na ihe ị na-amasị banyere ha ma ọ bụ ha onwe onye ad. Many of the principles of profile writing apply to emails, dị ka na-anọ mma, -eme ihe n'eziokwu, na ịkwụ nso ntị mkpoputa na asụsụ.
Meeting someone online is very exciting and can make you feel like a love-struck teenager, ma na-eme gị dịghị mma ka ọkụọ dị ka otu onye. Ọtụtụ n'ime anyị na-achọ onye na-a obere ihe tozuru okè, someone that has the potential for being a lifetime partner. Mgbe mbụ ị na-amalite na-ekwurịta okwu na onye, ọ dịghị ihe na-ezighị ezi na flirtation, inwe obi ụtọ, na-amụrụ amụ, ma jide n'aka na ọ bụghị n'elu. Ọzọkwa, adịghị amalite site agbapụtara mkpụrụ obi gị, na-agwa ya ma ọ bụ ya ihe niile banyere gị bụbu-nwunye ma ọ bụ bụbu-ịrịba ama ndị ọzọ. Zere ekwu okwu banyere onye ihe dị ka ego na nsogbu, ọrịa, ma ọ bụ akụkọ banyere gị dysfunctional ezinụlọ. Nke a bụ nnukwu turnoff, na ụzọ magburu onwe mmenyenjo onye pụọ. Zọpụta ụdị okwu ahụ n'ihi na gị Thursday n'abalị egosighị mmetụta egwuregwu ma ọ bụ ụbọchị na omezi isi. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-alụbeghị di nne na nna, a ntakịrị mkparịta ụka banyere gị na ụmụaka dị mma agbaji ice na-ahụ ọsọ n'ala, ma cheta na ị na-agbalị iru a ihunanya njikọ, so keep it to a minimum.
Mgbe a ga-eme ihe n'eziokwu!
Ọ bụrụ na ndị na-akpali mmekọrịta atụ, eziokwu ahụ ga-apụta emecha. It’s far better to be yourself upfront rather than tell a silly lie in the beginning, nanị ka a chọpụtara na-enwe a nwere mmekọrịta ada iche.
Mee ka ọ dị mma!
Ihe ikpeazụ onye ọ bụla chọrọ bụ ka izipu ozi na onye na omume, ịnụ ihe niile banyere ha n'oge gara aga na-emezughị mmekọrịta, nsogbu ahụ ike, ma ọ bụ ego ahụhụ. Ị nwere ike ịkekọrịta mbibi na ọchịchịrị mgbe ị ga-esi mara onye ọ bụla ọzọ a ntakịrị. Ma ọ bụ mma ma, dị tinye niile na stof n'azụ gị na-aga. E nweghị oge dị ka ugbu a iji na-amalite ọhụrụ!
Otito ihe ị hụrụ na-akpali ha profaịlụ.
Nke a bụ ebe ọ dị mkpa na-agụ onye profaịlụ. Ọ na-enye unu ihe na-ekwurịta banyere. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ị na-ahụ a na-akpali nwoke na o nwere Labrador nkịta dị nnọọ ka ị na-, i nwere ike kwuo ihe dị ka, “Ebe Ahụ. My aha ya bụ Meri na achọpụtara m na profaịlụ gị na i nwere Labs. M na-eme kwa!” Site n'ebe, enye a nkenke nkọwa gị nkịta, ya na ị ga-enwe na-anụ azụ, na pụọ.
Zere overtly mmekọahụ na-ekwu.
Unu na-abịa na kwa ike na mbụ na mmekọahụ mmegharị na-agbalị ka ọ ghara ikwu okwu na onye foto. Chọpụta ihe a obere ihe 'miri’ na-aza ajụjụ na, ma eleghị anya, ihe ha kwuru, sị ha nkọwa.
Chọta a ụzọ ịnọgide na-ekwurịta okwu.
Isi ihe nke mbụ email bụ-ha ka ha na-achọpụta na ị na-anabata azụ gị. Ẹkûkpa ihe ọmụma dị ukwuu, ma na-agwa ha iji na-esi na ha nwere mmasị. Ị na-agbalị iji nweta a mkparịta ụka na-aga, otú ajụ ajụjụ bụ ezigbo echiche, dị ka ogologo oge ị na-anaghị ajụ ọtụtụ.
Kwuo ihe i nwere na-emekarị, na ịjụ ajụjụ ma ọ bụ abụọ banyere ha.
Ọmụmaatụ, mgbe mbụ ị na-amalite ozi na onye, i nwere ike ịjụ, “Ọ bụ na unu na-eme ihe ọ bụla na-atọ ụtọ nke a izu?” “Ị nwere ihe ọ bụla oké atụmatụ maka izu ụka?” Nke a ga-enyere gị aka ịmụta ihe banyere onye na-enweghị yiri ka hà na nnyocha. Mgbe ị na e-ekwurịta okwu onye pụrụ iche n'ihi na a mgbe, i nwere ike iji aka ya dị ọcha ajụjụ ahụ ma ọ bụrụ na ị pụrụ ịhụ oghere mgbe unu abụọ pụrụ izute.
Gbalịa izere ogologo akwụkwọ ozi na obere nkọwa nke nwere ike-atụle-agwụ ike.
Mee ka ọ ruo n'ókè, ma na-agbalị ka gị na àgwà inwupụta. Mgbe ahụ, a mma ọchịchị nke isi mkpịsị aka bụ “Ekele na ajụjụ.” Siri otito na onye rụzuru, ide ịke, ma ọ bụ ndụ ihe mgbaru ọsọ nke ga-asị a otutu.
Ebe a na-a di na nwunye nke ọma, ice-na-agbasa Starter isiokwu:
Ọ bụrụ na ị na-ebi n'otu ebe, ikwu okwu banyere ebe ahụ, ma ọ bụ ihe metụtara ya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ndụ na otu ebe, i nwere ike ịjụ ajụjụ banyere ebe ha na-.
Music ma na fim na-ezi mkparịta ụka-Starter; almost everyone likes some kind of music or movie.
Ma eleghị anya, ị gaa otu mahadum ma ọ bụ mma ma, a na-ama akwụkwọ. Kwụsị ịtụ fun na-ama ụlọ akwụkwọ bụ mgbe a fun ụzọ agbaji ice.
Na ihe ịrịba ama gị ezigbo aha mbụ…
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ a ziri ezi, onye ahụ ga-kpọtụrụ gị azụ. Cheta, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-a nzaghachi, ị nwere ka ha na mmasị. Na ozi ịntanetị na-eso, na-ajụ ajụjụ ma na-complimenting (mgbe fọdụrụ n'eziokwu na ndị na nti). Mgbe ị na-ahụ na-eru, ị pụrụ ịkpali na ihe na-akpachi anya iche nke nkwurịta okwu dị ka nzi ozi, ekwentị, na-emecha, nzute na onye.
Ọ bụrụ na a ụbọchị na-aga site na ị nụrụ na ha, kama inundate ndị onye ahụ igbe akwụkwọ ozi dị na ozi, ahapụ otu obere, ụtọ ozi na-enye obere ndumodu ka ime ya ma ọ bụ ya iji zaghachi.
Enyela gị aha, onye email adreesị, ma ọ bụ nọmba ekwentị na mbụ a email; ichere ruo mgbe ị na na na na ma mmasị ma ọ bụ anya na ọ na-aga ebe.